बालीमा के हेर्ने | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | बाली, के हेर्ने
संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रसिद्ध टुरिस्ट गन्तव्य मध्ये एक हो बाली टापु। यदि हामी सुन्दरता, समुद्री किनार, एशियाई विदेशीवादको कुरा गर्छौं भने सम्भव गन्तव्यहरूको कल्पनामा बाली सूचीमा माथि छ।
बाली सम्बन्धित छ इन्डोनेशिया र यसको अर्थव्यवस्थाको 80०% पर्यटनमा आधारित छ त्यसैले आज, हप्ता सुरू गरेर हामी हेर्नेछौं बालीमा के हेर्ने। यो केवल घाममा पसेको छ र तातो पानीमा पौडी खेल्ने वा त्यहाँ अझै धेरै छ?
2 बालीमा के हेर्ने
हामीले भनेजस्तै, बाली इन्डोनेशियाको एक प्रान्त हो र राजधानी देनपसार हो। यो लेसर सुन्डा टापुको समूहमा पर्छ र यसको जनसंख्या मुख्यतः हिन्दू हो। टापु एक हो जैव विविधता सुन्दर र त्यो किनभने यो क्षेत्र को भाग हो रूपमा चिनिन्छ कोरल त्रिकोणकोरल भन्दा सात गुणा धनी जुन हामी फेला पार्न सक्छौं, उदाहरणका लागि क्यारेबियन सागरमा।
जालीबाट बाली तीन किलोमिटर मात्र टाढा छ, करिब २,००० मिटर अग्लो, सक्रिय ज्वालामुखी, नदी, कोरल रीफ र वरपरको वातावरण छ। 30 ºC सबै वर्ष धेरै उच्च आर्द्रता संग। नतिजा? धेरै तातो। सधैं वा प्राय: सँधै।
यस जलवायु संग छ मौसमी मौसम। अक्टुबर र अप्रिल र डिसेम्बर र मार्च बीचमा, त्यसैले यी मितिहरूको लागि जाने सोच्नुहोस्।
बाली टापु सानो छयो केवल १ by० बाय between० किलोमिटर, जाभा र लोम्बक बीचमा। यो असाधारण परिदृश्य र उर्वर भूमिहरूको ज्वालामुखी टापु हो र उच्चतम बिन्दु माउन्ट अगु is हो। यस टापुमा साढे दुई लाख मानिस बसोबास गर्छन् त्यसैले त्यहाँ छ उच्च जनसंख्या घनत्व.
बाली परिदृश्य र घटनाहरूको एक उत्तम संयोजन हो एक पारिवारिक गन्तव्य, आध्यात्मिक अभयारण्य, साहसीको स्वर्ग, गन्तव्य बन्नको लागि। foodies र सर्फर र कारमेल जोडीहरू। किन सुरु गरौं बालीमा हामी चिन्न सक्ने स्थानहरू।
यदि तपाईं उत्तम प्रकृतिमा डिजाइन गरिएको धर्ममा रुचि राख्नुहुन्छ भने गन्तव्य यही हो तनाह लोट मन्दिर। यो हिन्दू मन्दिर हो जुन चट्टानमा निर्माण गरिएको छ जुन तटबाट पाइला टेकेको छ र यसैले यस टापुमा सब भन्दा साधारण पोस्टकार्ड हो। तपाईले यसलाई २० किलोमिटर उत्तरपश्चिम डेम्पासार शहरको उत्तरपश्चिममा फेला पार्नुभयो र मितिबाट शताब्दी XVI।
अर्को सुन्दर मन्दिर हो Ulun Danu मन्दिर, बेगेडुलको ठीक बरातन तालको किनारमा बनाइएको। भवन सुन्दर छ र तालको देवीलाई समर्पित छ। यो शान्त र शान्त ठाउँ हो। र अन्तमा, युनेस्कोले घोषित गरेको साइटहरूको भ्रमण पूरा गर्न विश्व सम्पदा हामीसँग जट्लुविह छ: धानखेतs सपना जस्तो
हरियो Jatiluwih धान खेतहरूखजूरका रूखहरूले घेरिएका धेरै फोटोहरूका लागि योग्य छन्। तिनीहरू बीच हिंड्नको लागि यो एक सुन्दर अनुभव हो र ठीक जसको अर्थ उही नाम हो। jati y लुविहसँगै तिनीहरू वास्तवमा अद्भुत अर्थ। यो क्षेत्र तबानन जिल्लाको उत्तरमा अवस्थित छ, समुद्र सतहबाट 800०० मिटर, देनपसारबाट about 48 किलोमिटर र तबानानबाट २ kilometers किलोमिटर। विकर्षकलाई नबिर्सनुहोस्!
प्रकृतिसँगको सम्पर्कका सर्तहरूमा तपाई भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ बाँदर वन र उबुदमा उनको हिन्दू परिसर। यस जटिलमा करिब 500०० बाँदर रहेको छ र त्यहाँ तीनवटा मन्दिरहरू छन् जुन अझै १th औं शताब्दीबाट खडा छ। आज सम्पूर्ण क्षेत्र एक प्राकृतिक रिजर्व हो र तिनीहरूले तपाईंलाई जनावरहरूलाई केरा खुवाउन दिन्छन्। तपाईं पनि जान सक्नुहुन्छ Tirta Emul, एक मन्दिर परिसर जुन उबुदको ठीक बाहिर छ र पहाडहरूबाट पानी आउने धेरै पोखरीहरू छन्।
ठीक, यदि तपाईंले जुलिया रॉबर्ट्स, खाओ, प्रार्थना र प्रेमको साथ फिल्म देख्नुभयो भने, तपाईं यो साइट सम्झन सक्नुहुन्छ। भनिन्छ, पानी सबै हिन्दुहरूको लागि पवित्र छ। कोही पनि उनीहरुमा नुहाउन सक्छन् त्यसैले सम्मिलित हुनुहोस्!
पर्वतारोहण पर्वत यो पनि राम्रो भ्रमण हुन सक्छ। यो १1700०० मिटर अग्लो छ र बालीमा सब भन्दा राम्रो चिनिने ज्वालामुखी हो। संगठित भ्रमणहरू प्राय: बिहान early बजेतिर सुरु हुन्छ, त्यसैले तयार हुनुहोस्। को सूर्योदय दृश्य यसको माथिकोबाट यो सुन्दर छ, विशेष गरी पहाड वरपर एउटा ताल छ र जुन पहिलो बिहानी सूर्यको प्रतिबिम्ब झल्किरहेको छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै।
बालीको प्रकृतिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू जारी राख्दै हामी यसको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं आयुंग नदीमा राफ्टि गर्दै। यो नदीको किनार रमणीय गाउँहरूमा हिंडेर सँगसँगै मिल्छ र हरियो ज forest्गल जुन पानीको बजारसँगै जान्छ। शान्त पानीमा गतिविधिहरूको लागि गन्तव्य हुनुपर्छ, तब, सनुर: सर्फिंग, प्याराग्लाइडिंग र प्याडल बोर्डि।। को कुटा बीच यो पनि दुनिया भर बाट surfers आकर्षित गर्दछ। अन्य पानीको खेलहरूको लागि प्रयास गर्नुहोस् तनजुung बेनोआ: पानी jetpack, उदाहरण को लागी।
यदि डाइभिंग तपाईको चीज हो भने तपाई सक्नुहुन्छ Tulamben मा एक जहाज दुर्घटना तल डुबाउनुहोस्: यस पृष्ठभूमिमा दोस्रो विश्वयुद्धमा डुबिएको यूएसएटी लिबर्टी र विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय डाइभ साइटहरू मध्ये एक हो। डुबाउनको लागि अर्को साइट पदांग बाई, बालीको पूर्व र समुद्री तटबाट भ्रमण गर्नका लागि सात विभिन्न ठाउँहरू। र अर्को एक हो Amed, उत्कृष्ट दृश्यता र थोरै सस्तो डाइभि opportunities अवसरहरूको साथ कम ज्ञात गन्तव्य।
बालीमा तपाईले गर्न वा देख्न सक्नुहुने अन्य चीजहरूका साथै भ्रमण गर्नुहोस् बाली चिड़ियाघरबाघ, गैन्डो, हात्ती र रंगीन चराहरूसहित दक्षिणपूर्व एशियाली जनावरहरू भेट्नको लागि उत्तम ठाउँ। जनावरहरु संग अर्को साइट हो बाली मरीन र सफारी पार्क। तपाईं पनि एक यात्रा भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ चकलेट पोड कारखाना। इन्डोनेसिया विश्वको सबैभन्दा ठूलो कोकोको उत्पादक देश हो र उत्तम चकलेटहरू यहाँ बनाइन्छ, साथै कसरी सिमीहरू कसरी उम्रन्छ र प्रशोधन गरिन्छ भन्ने बारे पनि सिक्दै।
हामीले सुरुमा भनेको थियौं कि बालीसँग नजिकै केहि साना टापुहरू छन् त्यसैले तिनीहरूलाई चिन्नु पनि तपाईंको यात्राको एक हिस्सा हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, तपाई सक्नुहुन्छ दिन Menjanga टापु मा खर्चn, बालीको उत्तर पश्चिम। यहाँ तपाईं Menjangan राष्ट्रीय समुद्री पार्क को माध्यम बाट हिंड्न को लागी यात्रा गर्न, रंगीन माछाको बीचमा डुबाउन सक्नुहुन्छ, कछुवाहरू हेर्न र धेरै धेरै आनन्द लिन सक्नुहुन्छ ...
गाउँहरूमा सांस्कृतिक भ्रमणहरू थप्नुहोस्, माछा र समुद्री खानाको आधारमा ग्यास्ट्रोनमी, प्रत्येक दिन अर्को संस्कृति महसुस गर्नुहोस् वा कुटामा बारहरूमा जानुहोस् वा शान्तिको आनन्द लिनुहोस् उम्मेदवार। मेरो सल्लाह यो हो कि तपाइँ यी यात्राहरू मध्ये धेरै जसो ठीकसँग तपाइँको यात्रामा समाहित गर्न सक्नुहुन्छ: समुद्र तट, खेलकुद, भ्रमण, आराम, सम्भवत केही योग र धेरै खाना। कसरी?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » बाली » बालीमा के हेर्ने
ब्रिहुगा लैभेंडर क्षेत्रहरू